Sidee loo sameeyaa backlinks ku lug leh hantida la xidhiidha?
Taasi waa mawduuca saxda ah, inta badan sababtoo ah xaqiijinta horumarka joogtada ah ee dhinacaaga dhabarkaaga ah marnaba laguma gaari karo oo kaliya adoo abuuraya hanti isku xiran, xitaa tayada ugu sareysa. Dabcan, waxaa muhiim ah in la ogaado sida loo sameeyo dib u habeyn lagu abuurayo hanti la isku haleyn karo. Maxaa keenaya hantida la isku halleyn karo? Guud ahaan, hanti wanaagsan oo la isku haleyn karo wuxuu u taagan yahay qayb ka mid ah bogga qayb ahaan dib loo soo rogay oo kuugu adeegaya inaad abuurto saamiyo badan, raacaya, liis garaynta, jecel, iyo wixii la mid ah,. Laakiin wax walbaa waa in hantida laysku daro lafteeda ay ubaahan tahay dhiirrigelinta - fikradahani aad u fudud waxay wali tahay mid aad u badan oo ay ka mid yihiin ganacsatada dhijitaalka ah iyo SEOs. Haa, way ogyihiin sida loo sameeyo ka qayb qaadashada isticmaalka dhabarka ixtiraamka ah waa inaan qiraa, tusaale ahaan qaababka sare ee muuqaalka rafcaanka iyo qaybinta akhbaarta. Laakiin bal aynu wajahno - inta kale ee dallacaadda internet-ka iyo suuq-geynta ayaa badanaa la dayacay, xitaa run ahaantii runtii waa suuqyada websaydhka iyo mulkiilayaasha internetka. Taasi waa sababta hoosta aan u socdo oo dhan si aad u ogaatid dhammaan hababkii ugu wanaagsanaa ee aad adigu u ogaatid sida loo sameeyo dib udabeeyn leh suuq galin.
Ka hor inta kale, halkan waa waxa aan u baahan nahay in la qaato si loo helo - suuq-galinta content ma jirto wax la qabanayo iyada oo la siinayo is-xakameyn la xiriirta iibsiga, ugu yaraan. Waxaan loola jeedaa in istaraatiijiyadaada maadada lagu qaato miisaanka aan loo adeegsan karin inay u adeegto sida "link magnet". "Laakiin waxa halkan lagu sameyn karaa waxay la socdaan qayb ka mid ah dadaalkaaga guud - si gaabis ah u dhiirigelinta iibsiga xiriirka joogtada ah ee bogga ganacsigaaga ama blogka leh qayb ganacsi. Sidaa darteed, hoosta ayaa soo saarta liis kooban oo ku saabsan qodobo qodob oo kaa caawin kara taas.
Falanqaynta fursada - waa waxa ugu horreeya ee loo tixgeliyo ololaha kaashka iyo helitaanka xariirka. Dhamaan waxaad u baahan tahay bilawga rasmiga ah waa magac la aqoonsan karo oo ka mid ah nihada saxda ah ama ganacsiga ganacsiga - meesha abuuraysa fursado dhisme tayo sare leh.
Suurtagalinta - fursadda xigta ee muhiimka ah ee loo tixgeliyo hantidaada la isku dari karo. Dabcan, waxaa jiri kara siyaabo kala duwan oo noocyo kala duwan leh, oo badiba ku tiirsan tartanka suuqa tartanka, nooca kala duwanaanta suuqa, habka iskudhufinta dadaalka si loo daboolo ujeedooyinka, iyo sidoo kale helitaanka fursado la jaan qaadaya miisaaniyaddaada - shuruudaha dallacsiinta internetka, iyo sidoo kale nidaamka hal-abuurka ah ee akhbaaraha.
Falanqaynta tartanka si aad uga dhigto mid ka mid ah istaraatijiyadaha iibsiga ugu sarreeya ee horay u isticmaali jiray kuwa isqabaa ee suuqa, iyadoo loo marayo fursado dheeraad ah si looga fogaado musqulo daran oo horay u xannibay kuwa kaa soo horjeeda.
Ka qayb qaadashada bulshada si loo helo saameyn online ah oo ku saabsan saamiyada, sharaxaadda, isku xirnaanta, iyo dhalashada hogaanka.
Dalbashada dhismaha xiriirka jabsan iyo isticmaalka suurtagal ah ee sawirro gaar ah.
Kobcinta iskaashiyada ganacsiga, sii dheereenta dhexgalka isdhexgalka iyo la-talinta labada dhinac ee ku saabsan hindisaha mustaqbalka ee ka-qaybgalka bulshada iyo xiritaanka xiriirka Source .